FAQs - Ningbo WEDAC Point ny Sale Display Co., Ltd
Manana sary vitsivitsy ihany ny fampisehoana, dia afaka manome antsika ny teny nindramina? Raha tsy izany, inona koa no tsy maintsy hitaky?
Miala tsiny tsy afaka nanonona mifototra amin'ny marina ny sary, fara fahakeliny, ilaintsika ny fandrefesana isaky ny rafitra, hatevin'ny sy ny kalitao takiana ho amin'ny ara-nofo, habetsahany ilaina, ny famaritana noho ny fampiasana, sy ny fampahalalana ny vokatra izay tokony ho aseho.
Manana Sketch, no ampy?
Ok, fa manamarika ny mifandray azafady araka antsipiriany vaovao araka izay azo atao: ny fandrefesana and explanation, thickness and quality requirements for the material, quantity required,the description for its usage, and the information of the product which need to be displayed.
Manana foto-kevitra famolavolana
Ok, fa mariho tsara ny vaovao mifandray araka antsipiriany araka izay azo atao: ny fandrefesana, sakan'ny sy ny kalitao takiana ho amin'ny ara-nofo, habetsahany ilaina, ny famaritana noho ny fampiasana, sy ny fampahalalana ny vokatra izay tokony ho aseho
Izany no ho tsara indrindra, ary raha ny fanazavana manaraka dia ho hita, dia ho tanteraka;
ny vokatra izay tokony ho aseho
Sary An raha misy marika, sary Insert / taratasy, decal na ny fanontam-pirinty no ampiharina.
Pantone loko maro ho an'ny silkscreen fanontam-pirinty.
Inona no tokony hanome raha mila maneho ho namboarina?
Mba omeo izao manaraka izao raha toa ka mila namboarina miseho vondrona:
1. Ny be angamba ny filaminana voalohany.
2. Ny ara-teknika tanteraka napetraka ny sary dia ho ny tsara indrindra ho an'ny teny nindramina, famokarana na tsaina ny fepetra takiana.
3. Raha toa ka tsy manana ny sary ara-teknika, ny foto-kevitra (nanaovana) sarin'ny vokatry (na dia Sketch) amin'ny manakiana habe sy ny fanazavana dia ho hamolavola.
4. Ny antsipiriany ny vokatra mba ho aseho ao amin'ny vondrona fampisehoana: endriny, ny habeny, ny lanjany, ara-nofo, sary sns, satria tokony hanao ny mari / hizaha toetra ny fampisehoana miorina amin'ny antsipirihany ny vokatra, dia napetraka ny santionany feno ny ny vokatra ho ilaina mba hizaha toetra ny fampisehoana rafitra alohan'ny farany hatolony ho santionany.
5. Raha toa ny miseho tokony hatao eo amin'ny talantalana, azafady manome antsika tsipiriany ny talantalana: endriny, ny habeny, ny toerana lavaka fixture, ara-nofo, sary sns
Inona no fanazavana no ilaina ho teny nindramina, ary inona no fototra ilaina fanazavana dia tsy maintsy ho hita ny teny nindramina?
1. Mila ny fandrefesana isaky ny rafitry ny tsirairay anjara,
2. hateviny sy ny kalitao takiana ho amin'ny ara-nofo,
3. Vitao ny
4. fametrahana tontolo iainana sy ny tsipiriany
5. dia be ilaina,
6. ny famaritana noho ny fampiasana, sy ny fampahalalana ny vokatra izay tokony ho aseho.
7. fonosana tsipiriany
8. Sary An raha misy marika, sary Insert / taratasy, decal na ny fanontam-pirinty no ampiharina.
9. Customer fototra vaovao, fifandraisana
10. Price teny
Ahoana no ela no mahazo ny vidiny (teny nindramina)?
1. Raha antsipirihany sary omena, na ny tsipiriany rehetra vaovao azo teny nindramina , matetika vidin'ny azontsika omena ao anatin'ny 2 andro, dia hanome teny nindramina ela na ho haingana araka ny tena zava-misy ny asa.
Maro ny zavatra na ny sarotra koa ny toe maka zavatra somary elaela kokoa.
Basic vidiny (tsy misy fonosana antsipirihany, na asa taloha vidin'ny) mety ho mpamatsy taloha kokoa.
Complete teny nindramina (amin'ny antsipirihany fonosana, lanja, hitarika fotoana santionany sy ny famokarana sns) dia haka somary elaela kokoa.
2. Information tsy tanteraka, teny nindramina azo atao tsy misy sary, notsongaina ao anatin'ny 3 andro.
3. Mila hanao famolavolana aloha ary avy eo dia manome teny nindramina, matetika dia mitaky 1 herinandro mba hanome ny teny nindramina . Dia hanome teny nindramina ela na ho haingana araka ny tena zava-misy ny asa.
Inona avy ireo vokatra lehibe dia afaka mamokatra?
Acrylic fampisehoana, fampisehoana mitsangana, fampisehoana kabinetra, tarehy fampisehoana, talantalana pusher, PC vokatra, PETG entana sns
Inona koa no azonao atao ny manome?
Plastika fampisehoana, tsindrona vokatra, PVC extrusion, PVC mpihazona ny fampisehoana hazo, vy sns Display
Inona no MOQ ny WEDAC famokarana?
Maro loko Acrylic Display: 500kgs
Sheet vy Display hijoro: 100pcs
Nampidirany plastika Display: 1000pcs
Inona ny mahazatra fomba samy hafa fonosana vokatra?
1. General fonosana: 1pc / PE kitapo / anaty boaty, maro pcs / Carton, na maro pcs ao anaty boaty anatiny, dia N boaty ao anaty baoritra ..
2. ampahany fonosana: N pcs ao anaty baoritra, ary ny sasany fahafenoan'ny.
3. tantely avy amin'ny tohotra baoritra, hazo entana feno, hazo toe-javatra, sombin-javatra mpiaro, pallets hazo, plastika pallets sns ho an'ny safidy.
Inona no safidy fandoavam-bola no WEDAC manaiky?
WEDAC manaiky fandoavana ny manaraka:
1. T / T 50% mialoha toy ny petra-bola, ary ny ambiny araka ny kopian'ny B / L.
2. LC amin'ny fahitana
3. fomba fandoavam-bola hafa hodinihina sy fizahana toy ny isan-ny toe-javatra amin'ny antsipiriany.
Lead fotoana faobe santionany sy ny famokarana: Sample 3-15 andro, Mass famokarana 15-50 andro.
Fahataperan'ny daty ny teny nindramina: Matetika ao anatin'ny 30 andro ihany.
Sample manome vidiny:
Sarobidy ≤10 dolara, free, fa iraka anjara-raharahany dia tokony ho tompon'andraikitra ny mpividy.
Sarobidy> 10 dolara, vola = tarika Sample vidin'ny x 3 + iraka anjara-raharahany dia tokony ho tompon'andraikitra ny mpividy.
Raha toa ny entana mila hanokatra bobongolo, santionany vidin'ny mila vola ahitana ny bobongolo.
Ny mpividy dia afaka mampiasa T / T, paypal, andrefana firaisana, moneygram, & fomba hanaovana ny fanonerana ho an'ny santionana vidin'ny.
Ny vidiny dia avo;
Eny, mety ny vidiny dia ambony kokoa noho ny hafa ny sasany, satria tsy mampiasa fitaovana na nanapaka ambany zorony sy hiverina avy sub-fitsipika fananana, dia tsy mampihena ny hatsaran'ny asantsika mba mampihena ny vola lany ny vokatra, tsy te- manimba ny tsena ny mpanjifa amin'ny vokatra ratsy, manantena ny mpanjifa sy izahay miaraka soa azo avy amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana raharaham-barotra.
Afaka ny ho vidiny voalaza fifampiraharahana na nihena?
Eny, azo antoka, raha ny Qty., Spec. na ny teny sy ny toe-piainana sns dia ahitsy, na fiaraha ampy fahalalana nanorenana azy.
Ahoana ny santionany tsy neken'ny?
Dia hanitsy ary manome vaovao indray santionana maimaim-poana.
Efa nametraka didy. Ankehitriny inona?
Vaovao farany dia anao ny famokarana zava-misy miaraka amin'ny sary avy any amin'ny orinasa. Dia hanaraka ny dingana famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra, ho azo antoka ny zavatra rehetra hihaona ny tsara faneva, ho azo antoka tsy misy zavatra ratsy eo anatrehan'ny entana miala ny orinasa! ...... .and afaka manantena ny handray ny entana baiko taorian'ny fotoana famokarana (voalaza ao ny lamina) sy ny fandefasana ny fotoana (by dranomasina na ny rivotra).
Vaovao farany ve ianao anay ny famokarana zava-misy miaraka amin'ny sary rehefa mba napetraka?
Eny, azo antoka. Dia hanaraka ny fizotran'ny famokarana sy hiaro anareo vaovao farany.
Ahoana no hifehezana ny hatsaran'ny ny vokatra?
Manana 3 QCs, izy ireo-maso ny zava-drehetra sy ny isan'andro, vokatra rehetra dia nandinika amin'ny dingana tsarotra, toy ny hoe ny manta fitaovana, semi-vokatra, vita vokatra, nampirina entana etc ..
Ahoana ny fandefasana entana sy ny fitaterana? Moa ve ianao manana sambo azo itokisana mpandraharaha na forwarder?
Eny manana sambo azo itokisana mpandraharaha & forwarder miasa aminay nandritra ny taona maro, dia afaka foana hanolotra ny fananana ny seranana soa aman-tsara.
Raha manao FOB, manaiky ve ianao voatondro forwarder?
Eny, fa ny forwarder tokony ho eken'ny antsika koa alohan'ny boky toerana malalaka aminy, raha ny forwarder manana tafahoatra anjara-raharaha amintsika, na dia nahita olana aminy, dia manan-jo hangataka hiova amin'ny antonony iray, na fahazoan-dalana hidirana toy izany ny anankiray ho anao.
Ahoana ny fandefasana antontan-taratasy?
Amin'ny ankapobeny dia manome invoice, nampirina entana lisitra sy ny volavolan-dalàna ny entana toy ny fandefasana entana antontan-taratasy, raha toa ny mpividy mila antontan-taratasy hafa, trarantitra ianao, aoka isika mahalala mialoha.
Rehefa avy nandray ny entany, raha simba na tsininy vokatra hita, inona no tokony hataontsika?
Masìna ianao, alao ny sary sy handefa aminay avy hatrany isika, dia manolo izany amin'ny manaraka sambo.
Raha mba mametraka miverimberina, mety ho kely ny vidiny na hitandrina izany fotsiny ho toy ny voalohany mba?
Dia hijery ny vidiny, miorina amin'ny fifanakalozana tahan'ny ny vola sy ny fitaovana / asa lany eo ny fandraisana ny didy miverimberina, ary manao ny fanitsiana mifanaraka amin'izany.
Ve ianao orinasa / mpanamboatra na ny orinasa ara-barotra fotsiny?
Mpanamboatra izahay fa afaka manao varotra ihany koa raha ilaina.
Firy ny isan'ny mpiasa ao amin'ny orinasa?
Misy 25 ianao mpiasa ao amin'ny orinasa.
Ahoana ny famokarana fahaizana?
About USD500000 ho an'ny famokarana fampisehoana amin'izao fotoana izao, fa afaka manitatra ny famokarana fahafahana haingana.
Inona ny boky varotra amin'izao fotoana izao?
USD3 an-tapitrisany isan-taona.
Nahoana no hifidy acrylic fampisehoana?
1. nandritra ny Wall Ⅱ 1939-1945, tahaka ny plexiglass manokana, dia Voalohany acrylic be mpampiasa toy ny windshield hiady fiaramanidina sy fiara mifono vy, fanaovana ny fanompoana momba ny fiainana dia mihoatra ny 10 taona eo ambany mafy ny tontolo iainana.
2. Acrylic manana ambony ny mangarahara, ary ny tahan'ny fifindran'ny ny mazava dia niakatra ho any 92-93% --- ambony kokoa noho fitaratra! Noho izany dia manana ny lazan'ny "plastika kristaly".
3. Ny fahazavana toa malefaka, aina, ary marani-tsaina (toy ny diamondra)!
4. Manana tsara Weather fanoherana, epically ivelan'ny trano, ambony ny tampony hahatakatra ny plastika. Tsara fampisehoana ny hafanana avo, nanova mari-pana manodidina ny 96 ℃ ( 1.18MPa ) . Tsara Weather fanoherana, asidra sy alkali fanoherana, tsy misy tranga ny yellowing sy ny hydrolysis taorian'ny taona maro ny hatsiaka ambanin'ny masoandro sy ny orana.
5. Long fampisehoana ny fiainana: raha oharina amin'ny zavatra hafa (toy ny Sal, AS, PP sns), telo taona fampisehoana intsony ny fiainana!
6. Tsara anti-be taona fampisehoana any amin'ny habakabaka; santionany andrana naka fanahy hoe: rehefa afaka 4 taona voajanahary fahanterana, , acrylic vokatra ny lanjan'ny fahanterana, , hamafin'ny mamelatra ny lanitra, sy ny hazavana transmittance nampihena kely fahanterana, , loko mitodika kely mavo fahanterana, , crazing fanoherana fampihenana toa, na izany aza, anti-fiantraikany fampisehoana nitombo handimby azy, ka hafa physic fampisehoana saika tsy misy fiovana!
7. Izany dia ambony ny ditranao sy ny ivelany gloss,
8. Efa tsara sy miavaka FABRICATION fampisehoana, dia azo namorona ny hafanana, azo ampiasaina ihany koa amin'ny alalan'ny machining mekanika.
9. Acrylic azo atao ho isan-karazany ny endriny sy ny vokatra ilaina. Ny endri-javatra miavaka dia ny hitoetra ho ambony ny mangarahara amin'ny ambony ny hatevin'ny.
10. maivana, cheapness, mora hamolavola.
11. ny acrylic fitaovana manana manam-paharoa-java-mamirapiratra ambony ary koa ny tombony ireto: tsara mikasika ny Fahasarotana, tsy mora simba; repairable; manana mihasimba malefaka, ary tsy misy kely hatsiaka amin'ny ririnina. Manana loko maro, fihaonana fepetra samihafa. Products nataon-acrylic, dia tsy vitan'ny hoe tsara tarehy, fa koa ny hanjo.
12. Tontolo_iainana namana:
1) ny taratra dia mitovy amin'ny olombelona ny taolana.
2) fako azo amboarina fitaovana ampiasaina, fanodinana sy mora dia mora.
3) High Recyclable tahan'ny, Hatanjaho mitombo hatrany ny fanentanana momba ny tontolo iainana
4) Tsy misy mampidi-doza monomer na fofona dia ho afaka.
5) Food fiarovana, manisy ratsy ny vatan'olombelona.
13. Energy fahavaratra: Tsara ambaratongam-fahazavana fifindran'ny, hatramin'ny 92-93%, tsy dia mazava ny hamafiny
ilaina, fampihenana ny jiro, ny hery famonjena, fahavaratra angovo sy ny vidiny.
14. vokany lalina ilay fanoherana, enina ambin'ny folo heny noho ny olon-tsotra fitaratra, mety ho fametrahana ao amin'ny faritra azo antoka ho an'ny mila fanampiana manokana.
15. Tsara Insulation fampisehoana, mety ho fitaovana isan-karazany ny herinaratra.
16. Light lanja, antsasaky ny lanjan'ny tsotra fitaratra.
17. Colorful, ambony ny famirapiratry ny mazava, manam-paharoa ny fitaovana hafa.
18. matanjaka plasticity, mora koronosy.
19. Mora foana, mora madio, mazava ho ranonorana afaka madio.
20. Soft mihasimba, mahatsiaro ho tsy dia mangatsiaka toy ny fitaratra na tanimanga amin'ny ririnina.
21. Bright ny lokony, mitsenà ilay olona mikatsaka ny kalitaon'ny fiainana.
22. Excellent fampisehoana ho an'ny fanontam-pirinty na coating, raha mety ampiasaina fanontam-pirinty, na tifitra coating teknolojia, mety hanome vokatra tsara acrylic fandravahana ambonin'ny vokatry & fomba fijery.
23. Tsara faharetana, mitovy amin'ny aluminium, fahamarinan-toerana tsara tamin'ny zavatra simika, no mahatanty ny fahasimban'ny akora simika maro.
24. hotetehina fiarovana ny anatiny jiro, hanitatra ny fanompoana fiainan'ny jiro.
25. ny hanjo ny afo, afaka ny setroka sy ny tena tampoka extinguishing.
26. Misy zavatra acrylic ianao izay manana maro samy hafa sy fampisehoana, loko isan-karazany sy sary vokany, afaka hihaona fepetra samihafa ny mpanjifa.
27. Extremely maso araka ny tokony impacting taorian'ny fanodinana, HAINGOTRANO SY fanontam-pirinty.
Inona no maha samy hafa ny acrylic fanehoana sy ny zavatra hafa? Acrylic vs Glass
Ao amin'ny orinasa, acrylic fitaovana manana fampiharana midadasika kokoa noho ny fitaratra ara-nofo, araka ny maro ny fitaratra tombony ara-nofo.
1. Ao amin'ny endriky ny fanodinana, acrylic azo tsinjaraina bebe kokoa ho amin'ny teny sy ny endriny noho ny fitaratra.
2. Izy ireo dia samy marefo, na izany aza acrylic zavatra kokoa noho ny fitaratra hentitra loatra. Rehefa fitaratra fiatoana, dia ho maranitra potipotehiny farantsa izay hanimba mora foana ny olona; acrylic raha mizara ho lehibe, farantsa mivantambantam-piteny, ka tsy hanimba ny olona. By ampitahaina roa ara-nofo, ny iray mampidi-doza kokoa acrylic fitaovana.
3. Samy fiarovana avo ho an'ny sakafo kilasy, simika fahamarinan-toerana fahanterana, , miaritra ny zavatra simika fahasimban'ny ankapobeny, tsy mety levona amin'ny rano.
4. Visible fahazavana permeation fahanterana, , UV fahanterana, , ny lanjany dia 1/2 ny mahazatra fitaratra.
5. Light permeation ny 92-93% fahanterana, , olon-tsotra mangarahara plastika (Sal, AS, PVC sns) ihany no manana fahazavana permeation kely mihoatra ny 80%.
6. Anti-fiantraikany fampisehoana dia 12 ~ 18 fotoam-tsotra silisiôma fitaratra.
7. Mechanical mafy sy ny manovaova dia 10 heny noho ny olon-tsotra silisiôma fitaratra fahanterana, , hamafin'ny mitovy amin'ny aluminium fahanterana, , niavaka Weather fanoherana sy ny fahanterana fanoherana.
8. Outstandingly fomba fijery tsara tarehy fahanterana, , manana toy ny vato krystaly-gloss rehefa avy Nikosokosoka fahanterana, , antsoina hoe "Mpanjakavavin'ny plastika Crystal".
Acrylic vs Sal
Differerence eo amin'ny acrylic maneho sy ny Sal nampidirany Display:
1. Asehoy ny mijery ny acrylic mangarahara kokoa sy mahafatifaty noho ny Sal nampidirany fampisehoana fitoeran'entana, ary manana ny ambony ambony gloss, manana toy ny vato krystaly-gloss rehefa avy Nikosokosoka ,; Excellent fampisehoana ho an'ny fanontam-pirinty na coating, raha mety ampiasaina fanontam-pirinty, na tifitra coating workcraft, dia mety hanome vokatra tsara acrylic fandravahana ambonin'ny ezaka & fomba fijery. Koa izany no fomba fijery tsara tarehy tsy manam-paharoa outstandingly.
2. Acrylic manana ny fiainana fampisehoana ela kokoa noho ny Sal, telo taona, fara fahakeliny, eo amin'ny fanompoana intsony ny fiainana.
3. Ny acrylic fampisehoana fitoeran'entana tsy mila manokatra bobongolo, dia toy izany no tsy misy bobongolo vola sitraponao, sy ny habeny ary ny rafitra azo namboarina conveniently fotoana rehetra.
4. Na izany aza ny fampisehoana dia be acrylic tarika vidin'ny ambony noho Sal nampidirany fampisehoana.
5. Sal nampidirany miseho fitoeran'entana dia be ao amin'ny vondrona vidiny mora kokoa, na izany aza dia tokony hanokatra ny lasitra tany am-piandohana ary manana lasitra vola mba handoavana Fanampin'izany.
6. Acrylic manana matanjaka be endurability ivelan'ny trano eo ambany tontolo iainana, dia manana miavaka Weather fanoherana.
7. Acrylic manana anti-UV be fampisehoana, anti-fahanterana fampisehoana.
8 Samy marefo, mari-pana ambany famoretana ambany.
9. Sal manana tsara kokoa tsindrona fampisehoana, mety ho be dia be amin'ny famokarana. Small fihenan'ny tahan'ny ny vokatra, ny habeny dia tranon'omby.
10. Sal aorian'ny hatsiaka ambanin'ny masoandro, mora ny hiverina mavo sy blurring.
2. Acrylic manana ny fiainana fampisehoana ela kokoa noho ny PP, telo taona, fara fahakeliny, eo amin'ny fanompoana intsony ny fiainana
4. Na izany aza ny fampisehoana dia be acrylic tarika vidin'ny ambony noho ny PP nampidirany fampisehoana.
5. Asehoy ny PP nampidirany fitoeran'entana dia be ao amin'ny vondrona vidiny mora kokoa, na izany aza dia tokony hanokatra ny lasitra tany am-piandohana ary manana lasitra vola mba handoavana Fanampin'izany.
6. PP dia malefaka, tsy toy ny matanjaka sy mafy toy ny acrylic.
7. PP ny mangarahara dia tsy afaka ampitahaina amin'ny arylic.
8. Acrylic manana matanjaka be endurability ivelan'ny trano eo ambany tontolo iainana, dia manana miavaka Weather fanoherana.
9. Acrylic manana anti-UV be fampisehoana, anti-fahanterana fampisehoana.
Asehoy ny mijery ny acrylic mangarahara kokoa sy mahafatifaty noho ny PETG fitoeran'entana, ary manana ny ambony ambony gloss, manana toy ny vato krystaly-gloss rehefa avy Nikosokosoka ,; Excellent fampisehoana ho an'ny fanontam-pirinty na coating, raha mety ampiasaina fanontam-pirinty, na tifitra coating workcraft, dia mety hanome vokatra tsara acrylic ravaka ambonin'ny vokany. Koa izany no manam-paharoa & outstandingly fomba fijery tsara tarehy.
PETG ' S manohitra ny fiantraikany 1-3 fampisehoana dia fotoam-hery acrylic , ary 3 ~ 10 fotoam-tsotra acrylic. PETG: Hard, manohitra ny fiantraikany, sy ny hanjo, teo ambanin'ny tontolo iainana ny maripana -40 latsaky ny ℃ . PETG vokatra ampy ho an'ny fabricatio endurability N, fitaterana ary ny fampiasana. Mety tsy namaky tsara.
PETG manana tsara kokoa namorona fampisehoana, tsy misy fotsy rehefa avy hiondrika eo ambanin'ny mari-pana ara-dalàna, tsy misy fotsy taorian'ny hiondrika mangatsiaka, tsy misy crack, mora ho an'ny fanontam-pirinty sy ny ravaka.
PETG moa no moramora kokoa ny hamokatra vokatra amin'ny manasarotra rafitra sy mamelatra ny lanitra intsony.
PETG dia afo mahatohitra, tsy an'i combustible, ary tsy manampy may, manaraka ny fitsipika ny fanorenana ara-nofo, tsy mampidi-doza fananana vokatra rehefa may, azo antoka kokoa noho ny acrylic.
Anti-UV, be azo ampiasaina amin'ny signages ivelan'ny trano na an-trano, Point ny Sale, Display fitoeran'entana, fitaovana an-tokotany, ny varotra trano rantsankazo, fiarovana tontonana ny fitaovana, toerana milalao tontonana, vending milina tontonana etc.
Tena namana vokatra thermoplastic tontolo iainana, tsy misy hafa afa-tsy singa simika C, H, O, dia karazana plastika izay biodegradable. Vokatra vita amin'ny ity hafatra ity rehefa nandao, dia ho nitodika tany ny rano sy ny gazy karbonika, Mety ho amboarina tsy mandoto ny tontolo iainana.
PETG dia lafo kokoa noho ny acrylic, fa mora kokoa noho ny PC sy mateza kokoa noho ny acrylic.
PETG mifanaraka ny sakafo fifandraisana fari-FDA, dia azo ampiharina amin'ny sakafo, fitsaboana sns vokatra, dia azo ampiasaina ho ara-nofo na fitoeran fonosana samihafa ny sakafo ...... ary maharitra lipids ary be dia be ny zavatra simika, mahatohitra ny fahasimban'ny ny asidra, alkaline sy menaka sns, dia raisina ho toy ny fitaovana azo antoka ho an'ny sakafo sy ny olona.
PETG efa be mpampiasa amin'ny ankasitrahana tavoahangy sy ny lids, tarehy tavoahangy sy ny lids, tahaka ny fantsom-lipstics, tarehy boaty, deodorizer kaontenera, zazakely vovoka tavoahangy, eyeliner satroka, sns ary PETG tsindrona vokatra: sivana, eustachian Tube, connector ny fantsona , paompy, hoho, ary dialysis fitaovana sns Household vokatra toy ny kaopy, vilia baolina salady, saltcellar, dipoavatra Shaker, karatra banky, ny rano sns kaontenera, izay avo mila fepetra azo antoka ho an'ny olona.
1. PVC no malemy, mora vidy ary matetika thinner.
2. Transparent PVC hatevin'ny matetika dia tsy mihoatra noho ny 3mm.
3. PVC ny mangarahara dia tsy afaka ampitahaina amin'ny arylic.
4. PVC dia tsy amin'ny fihinanana soa aman-tsara, fa tsy ny tontolo iainana sariaka.
5. PVC matetika dia ampiasaina miaraka amin'ny acrylic rafitra ho toy ny ampahany amin'ny naseho.
Differerent tanteraka amin'ny lafiny rehetra: ny fomba fijery, ny mangarahara, ny mihasimba etc.
Acrylic vs hazo
Samihafa amin'ny lafiny maro, fa indrindra indrindra ny hery acrylic famonjena, fiarovana ny tontolo iainana, na izany aza dia mila hazo hanisy ratsy ny tontolo iainana.
Acrylic vs Sheet metaly
Indrindra fahasamihafana miseho toy ny mangarahara, fomba fijery, mateza sy hentitra.
Mampitaha amin'ny nentim-paharazana tanimanga fitaovana, acrylic manana manam-paharoa avo gloss, ary manana ireto tombony: Tsara manovaova, tsy mora vaky, mora ho namboatra koa, ihany no mampiasa ny malefaka sombin-javatra eny amin'ny kely toothpaste, afaka manadio ny fahadiovana mba ho vaovao.
Soft mihasimba, tsy mahatsapa fa mangatsiaka amin'ny ririnina.
Bright ny lokony, afaka hihaona olona samy hafa nanenjika ny hatsaran'ny fiainana.
Tontolo_iainana namana, dia ny taratra dia mitovy amin'ny olombelona ny taolana.
Inona no maha samy hafa ny fanehoana sy ny nampidirany glued miseho?
Asehoy glued tsy mila manokatra bobongolo, sy ny rafitra ary ny fanahafana azo namboarina fanampiny isaky ny tsy misy fiampangana, dia toy izany dia hamonjy goavana be ny bobongolo vidin'ny mampitaha amin'ny nampidirany ireo, ka dia miseho glued ny mampitaha ny fomba fijery tsara nasongadina amin'ny nampidirany ireo. Rehefa tsy te-vola ny lasitra vola, na ny vokatra dia tsy mety ho tsindrona, na ny olona tsy te-hamokatra be ho an'ny maro ny modely, na ny olona te-hanandrana ny tsena amin'ny endrika vaovao, glued acrylic maneho no ho safidy tsara indrindra. Mila vokatra nampidirany ny mpividy mba vola ny lasitra famokarana vola lany na lamin 'goavana be, ary indray mandeha ny lasitra fanokafana ny modely iray no nanomboka, dia tsy azo farany na niova intsony. Raha te-hanana modely hafa amin'ny "tsara kokoa" famolavolana, dia tsy maintsy hanokatra vaovao indray bobongolo, na mampiasa glued acrylic FABRICATION.
Asehoy ny mahery dia glued ampy?
Eny, raha tsy hanipy azy na mitsangana eo aminy, na mampiasa ny acrylic metaly fampisehoana hanao biriky.
Inona no endri-javatra sy ny tombontsoa lehibe ny glued acrylic fampisehoana?
Asehoy glued tsy mila manokatra bobongolo, sy ny rafitra ary ny fanahafana azo namboarina fanampiny isaky ny tsy misy fiampangana, dia toy izany dia hamonjy goavana be ny bobongolo vidin'ny mampitaha amin'ny nampidirany ireo, ka dia miseho glued ny mampitaha ny fomba fijery tsara nasongadina amin'ny nampidirany ireo. Rehefa tsy te-vola ny lasitra vola, na ny vokatra dia tsy mety ho tsindrona, na ny olona tsy te-hamokatra be ho an'ny maro ny modely, na ny olona te-hanandrana ny tsena amin'ny endrika vaovao, glued acrylic maneho no ho safidy tsara indrindra.
Ahoana ny amin'ny fampandrosoana ny drafitra amin'ny hoavy akaiky indrindra?
Dia hampitombo be dia be ny andian-acrylic mampiseho (ny ankamaroan'izy ireo amin'ny pusher rafitra, ary koa fitaovana hafa toy ny MDF, PC, PETG, taratasy vy sns) ny tsipika samy hafa, toy ny makiazy, pharmaceuticals & fahasalamana vokatra, e-sigara, zava-pisotro sy zava-pisotro, isan'andro mandevona & tokantrano zavatra sns, fa ny fampiasana ny merchandising, santionany mampiseho, etc. fampiroboroboana ny varotra
Dia hanatrika Globalshop 2015 tao Las Vegas ao Etazonia nandritra ny Mar. 24-26 faha 2015.
Ahoana ny fomba workcraft:
Nahatan-Design na fanaraha Fitaovana → → Fividianana Laser manapaka → → nijoro Nikosokosoka → → hafanana hiondrika Silk efijery pirinty gluing → → → mivory maso → → nampirina entana entana
Inona ny tena Fitaovana?
Laser fanapahana milina 5
Haingam-pandeha ny router 2
Diamondra Nikosokosoka milina 1
Ampela fikosoham-bary milina 1
Lelafo Nikosokosoka milina 2
Table nahita 2
Table sokitra milina 1
Fametrahana mazava tsara namaoka lafaoro 1
Heat hiondrika milina 4
Ultrasonic welding milina 1
Ary more ......
Ve ianao manome mampiseho marika iraisam-pirenena na inona na inona?
Eny, Loreal, Kaufland, Rimmel, Sally Hanson, Napolean Perdis, K-Mart, Big-W, Watsons, Evergreen sns
Manana QC sampan-draharaha?
Eny, izahay manana departemanta QC, 3 QC.
Manana R & D sampan-draharaha?
Eny, manana R & D sampan-draharahan'ny, 3 mpamorona.
ODM ve ianao hanome vokatra?
Eny, manana be dia be isika ODM vokatra. Isam-bolana isika dia hanana fara fahakeliny, 2-3 vokatra vaovao amin'ny famolavolana vaovao.
Mba miresaka ny varotra ekipa ary asaivo mivantana amin'ny alalan'ny mailaka, Skype , or telephones!
Izy ireo dia hanome anao avy hatrany sy matihanina valinteny!
Adiresy: Room 1301, 13/F East building of Kemao Center, No. 100 Xiangyun Road, Gaoxin District, Ningbo 315040, Zhejiang, China
Adiresy: Room 1301, 13/F East building of Kemao Center, No. 100 Xiangyun Road, Gaoxin District, Ningbo 315040, Zhejiang, Sina